Izinsizakalo Zezithombe Ukuthengisa Nokuqasha e-United States
US zu Ngena ngemvume
1 - 1 ka 1 uhlu
ukubuka Izinsizakalo Zezithombe eshicilelwe 3 years ago
Photography Services in United States
Khetha isigabaResidential homes Houses Apartments Flats Rooms Condos Townhouses Units Villas Homes Foreclosed HomesLand lots Residential Land Agricultural Land Industrial LandGarages and parking places Parking garagesCommercial Real Estate Office spaces Business Premises Buildings of free appointmentAll Others Real Estate All Others Real EstateBusiness Directory Financial Service Providers Moving Companies Home Improvement Contractors Home Inspection Services Construction Companies Cleaning Contractors Design Services Furniture Companies Photography ServicesReal Estate Agent Directory Real Estate Agents Real Estate Brokers Property Managers
I-United States of America (USA), eyaziwa kakhulu ngokuthi i-United States (i-US noma i-US) noma iMelika, iyizwe eliqukethe izifunda ezingama-50, isifunda sombuso, amasimu amakhulu amahlanu azibusayo kanye nezimpahla ezahlukahlukene. Kumakhilomitha-skwele ayizigidi ezi-3,8 (amakhilomitha ayizigidi eziyi-9,8), iyizwe lesithathu- noma lesine ngobukhulu emhlabeni wonke. Iningi lezwe litholakala enkabeni yeNyakatho Melika phakathi kweCanada neMexico. Ngokwesilinganiso sabantu abangaphezu kwezigidi ezingama-328, i-US iyizwe lesithathu elinabantu abaningi emhlabeni (emva kweChina neNdiya). Inhloko-dolobha yiWashington, DC, futhi idolobha elinabantu abaningi kakhulu yiNew York City. Ama-Paleo-MaNdiya asuka eSiberia aya ezweni laseNyakatho Melika okungenani eminyakeni eyi-12,000 edlule. Ikoloni laseYurophu laqala ngekhulu le-16. Izwe laseMelika lavela emikhakheni eyishumi nantathu yaseBrithani eyasungulwa ogwini lwase-East Coast. Izimpikiswano eziningi phakathi kweGreat Britain kanye namakoloni kwaholela kwiMpi Yezinguquko yaseMelika ehlala phakathi kuka-1775 no-1783, yaholela enkululekweni. I-United States yaqala ukwanda okunamandla kulo lonke elaseNyakatho Melika kuyo yonke le nkulungwane ye-19 — kancane kancane yathola izindawo ezintsha, yaxosha amaMelika Omdabu, futhi yavuma amazwe amasha — kwaze kwaba ngo-1848 lapho iqala izwekazi. Engxenyeni yesibili yekhulu le-19, iMpi Yezwe YaseMelika yaholela ekuqothulweni kobugqila e-United States. Impi yaseSpain neyaseMelika neMpi Yezwe I yaqinisekisa isimo sezwe njengempi yezempi yomhlaba. I-United States yavela eMpini Yezwe II njengamandla amakhulu omhlaba. Kwakuyizwe lokuqala ukwakha izikhali zenuzi futhi kuwukuphela kwezwe okwakusetshenziswa kulo empini. Ngesikhathi sempi ebandayo, i-United States kanye neSoviet Union bancintisana ku-Space Race, baqeda ngo-1969 Apollo 11, isibani esibonisa ukuthi abantu bafika nini eNyangeni. Ukuphela kweMpi Yomshoshaphansi nokuqothuka kweSoviet Union ngo-1991 kwashiya iMelika yaba ukuphela kwamandla omhlaba.I-United States iyinhlangano yeningi futhi iyinhlangano yeningi. Kuyilungu elisungule i-United Nations, i-World Bank, i-International Monetary Fund, i-Organisation of American States (OAS), NATO, nezinye izinhlangano zomhlaba jikelele. Kuyilungu elihlala njalo loMkhandlu Wezokuphepha weNhlangano Yezizwe. Izwe elithuthuke kakhulu, i-United States ingumnotho omkhulu kunayo yonke nge-GDP uqobo, ingeyesibili ngobukhulu ngokuthenga amandla ombuso, futhi ilinganiselwa cishe kwikota ye-GDP yomhlaba. I-United States ingumngenisi omkhulu kunabo bonke emhlabeni kanye nomthengisi wesibili ngobukhulu wezimpahla, ngenani. Yize inani labantu bakhona lingama-4% omhlaba wonke, liphethe ama-29.4% omnotho ophelele emhlabeni, isabelo esikhulu kakhulu somnotho wembulunga yonke ogxile ezweni elilodwa. Ngaphandle kokungafani kwemali engenayo kanye nengcebo, i-United States iyaqhubeka nokuphezulu kakhulu ezindleleni zokusebenza kwezenhlalo, kufaka phakathi isilinganiso samaholo, imali engenayo eyisipesheli, ingcebo esezingeni eliphakathi nendawo, ukuthuthukiswa kwabantu, i-capita GDP ngayinye kanye nokukhiqizwa kwabasebenzi. Ungamandla ezempi aphambili emhlabeni, enza okungaphezu kwengxenye yesithathu kokusetshenziswa kwemali yezempi emhlabeni wonke, futhi uyibutho eliphambili lezepolitiki, lamasiko nezesayensi emhlabeni jikelele.